ကာတွန်း ATH – တပ်မတော်သည် ဘယ်တော့မှ ……. သစ္စာမဖောက် | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း စောငို - သမတဖြစ်ဖို့ အထက်က ခွင့်မပြုဘူး ...
ကာတွန်း ATH – တပ်မတော်သည် ဘယ်တော့မှ ……. သစ္စာမဖောက်
သြဂတ်စ် ၂၉၊ ၂၀၁၅
One Response to ကာတွန်း ATH – တပ်မတော်သည် ဘယ်တော့မှ ……. သစ္စာမဖောက်
robertmoore on August 29, 2015 at 10:21 am
ကာတွန်းဆရာ အမှန်တွေတအားဆွဲပြတို့ကသဘောကျ ဟီးးးးမြှောက်ပေးတာ လျှောက်မရေးနဲ့ သူတို့ကထိရင်အရမ်းနာတတ်တာ